Kutheni sibuye saphinda saphinda satshintsha indawo yethu kwiMartech.zone | Martech Zone
NgeCawa, nge-29 kaJanuwari 2017 NgoLwesine, Meyi 7, 2020 Douglas Karr
Igama elithi blog linomdla. Kwiminyaka eyadlulayo, xa ndandibhala Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies, Ndiyithande ikota blog kuba ichaza imeko yobuntu kunye nokwenza izinto elubala. Iinkampani bekungasafuneki ukuba zixhomekeke ngokupheleleyo ekubambeni iindaba ukuveza inkcubeko yazo, iindaba, okanye inkqubela phambili. Banokusasaza abo baphuma ngebhlog yabo yequmrhu kwaye bakhe uluntu ngeendaba zentlalo ezingqina uphawu lwazo. Ixesha elingaphezulu, banokwakha abaphulaphuli, uluntu kunye nokukhuthaza.
Iinkampani zikwazile ukwabelana ngolwazi olu ngaphaya kweepropathi (abeendaba), nangona. Banamathuba amangalisayo okuba ilizwi labo livakale kwezinye iimpapasho (eendaba ezuziweyo). Zombini, ewe, zinethuba lokwabelana (Imidiya yokuncokolaokanye ahlawulwe kwaye anyuselwe (Imidiya ehlawulwayo). Igama elithile UkuBhloga ngokuBumbeneyo yayisikelwe umda, kunye nexesha UkuThengiswa kweMpahla Bakhokele kule minyaka mihlanu idlulileyo ukugubungela izicwangciso ezenziwa ziinkampani kumajelo eendaba, bafumana amajelo eendaba, amajelo asekuhlaleni kunye nemithombo yeendaba ehlawulelweyo. Into ebangela umdla kukuba, wayenayo incwadi ebhalwe ngokuchanekileyo kodwa wayibiza ngokuba yiNtengiso yeKhontenti yeeDummies… ngeyimile kuvavanyo lwexesha. Kodwa ixesha blog lilinganiselwe ixesha lokuphila.
Igama lesiza sethu lalibizwa ngokuba yi- Martech Zone nge URL marketingtechblog.com. Ndenza into efanayo kwindawo yam endiyenzileyo ngencwadi yam. Igama elithile blog kukhuphe iimpendulo ezifanayo. Igama elithile blog ivakaliswe ngathi indala, ibhalwe igama lomntu, kwaye ayingobungcali. Ndathetha ngokuqhubekayo kule ndawo njenge ushicilelo. Abanye babhekisela kwiiblogi zabo njenge iimagazini zedijithali. Nangona kunjalo, bendisoyika ukutshintshwa kwesizinda ngenxa yegunya lokukhangela endalilakhele kuloo ndawo, ke andizanga ndilinge nokuyihlaziya. Kude kube kutshanje, xa uGoogle eyekile ukohlwaya ukuqondisa kwakhona kwaye wongeza i Inkqubo yotshintsho lwesizinda kwikhonsoli yokukhangela.
Kwakunzima nokuba sabelane ngesizinda sethu. Kwakusoloko kufuneka sithe ukuthengisa-itekhnoloji-yebhlog-dot-com kwaye siyipele ebantwini xa sixoxa ngayo. Yayingengommandla oziqengqele ngaphandle kolwimi kwaye kwakulula ukuguqulela kwi-URL umntu anokuyikhumbula kwaye ayichwetheze kwisikhangeli. Incoko iye yaba lixesha elamkelweyo lishishini kwintengiso kunye nentengiso enxulumene nobuchwepheshe kunye nezisombululo.
Ndikhangele kaninzi-ninzi kwimimandla enxulumene nemartech enokubakho ekulula ukuyikhumbula… kwaye yenzekile ekugqibeleni Indawo yeMartech (sikwanentengiso. iteknoloji kodwa inde kakhulu).
Ukuzisa Martech Zone
Sincede iinkampani ezininzi ukuba zifudukele kwimimandla emitsha kwaye sabukela isikhundla sabo ekugqibeleni siqhelekile kwaye sibuya. Kwakulixesha lokuba nathi senze okufanayo ke ndatsala iplagi- emva kweshumi leminyaka-ngolwe-Sihlanu. Ubukhulu becala ibikukufuduka okulula ukugcina izinto ezimbalwa:
Uya kumangaliswa yindlela oyisebenzisa ngayo igama lethambeka kwiinkangeleko nakwiindawo zomntu wesithathu! Ndicinga ukuba ndiyisebenzise kumashumi amawaka ezityikityo zesiza kunye neendawo zokubhalisa. Oku kuye kwaba ukuvula amehlo kwangempela!
Amakhonkco ethu amadala kunye nesizinda babesemva kwe- Isitifiketi seS SSL. Ngenxa yoko, asinakho nje ukuphosa i-alias kwindawo yethu kwaye sithumele abantu kwakhona. Kwafuneka sibambe indawo yesibini kunye ne-domain yethu yakudala, sifake isatifikethi, kwaye senze ukuhambisa ngokusisigxina kwidomeyini entsha. Kuya kufuneka ukuba sikwenze oku ngemifanekiso njengoko sinee-URLs ekubhekiswa kuzo nge-imeyile kunye neeapps ezihambayo. Ndisajonga ifuthe.
Siphulukene nazo zonke zethu unxibelelwano lwasentlalweni lubala. Andinaxhala kakhulu ngale nto, kwaye sayeka ukubhengeza ukubalwa kwezabelo. Ndiyamangaliswa kukuba akukho nanye kumaqonga amafutshane kunye namaqonga ezentlalo alandela ikhonkco njengoko iinjini zokukhangela zisenza. Kubonakala ngathi ukulandela ii-URLs kunokuba yinto entle ukucoca idatha yabo.
Ke ngoku unayo! Ngoku silungelelanisa zonke iipropathi kunye neendawo zentlalo ukuze sibandakanye uphawu olutsha… lwethu Upapasho lweMartech, yethu Martech Zone Udliwanondlebe nePodcast, Kunye neziteshi zethu zaseMartech zentlalo (jonga ukuba senza njani utshintshe i-Twitter ngaphandle kokuphulukana nabalandeli)!
Farewell Martech Zone kwaye molo Martech Zone!
tags: Ukufaka uphawuukutshintsha idomeyiniukubhloga ngokudibeneyo kweedummiesutshintsho lwesizindaItekhnoloji yeNtengiso yeTekhnolojiItekhnoloji yentengiso yebhlogintengisoblogmartechibhlog yemartechmartech zoneukuqondisa kwakhona ngokusisigxinaSEO